प्रेम, सेक्स र कमिटमेन्टः कति बद्लियो सम्बन्ध ? जबसम्म आकर्षक लाग्छ तबसम्म मात्रै प्रेम टिक्छ – www.agnijwala.com
प्रेम, सेक्स र कमिटमेन्टः कति बद्लियो सम्बन्ध ? जबसम्म आकर्षक लाग्छ तबसम्म मात्रै प्रेम टिक्छ
प्रेम एक अनुभूति । मनबाट स्वतस्फूर्त प्रकट हुने भाव । यही भावले वैशालु जोडीलाई एकाकार गराउँछ । सेक्स, एक शारीरिक क्रिया । यद्यपी यसका आफ्नै सर्त र सीमा छन् । सृष्टिलाई चलयमान बनाउन आवश्यक एक जैविक प्रक्रिया ।
कमिटमेन्ट, एक विश्वास र भरोसा । कमिटमेन्ट बिना न प्रेम टिक्छ, न यौन जीवन ।
तर, समयसँगै बद्लिदो परिवेशले यी तमाम शब्दको परिकल्पना र यर्थाथ बदलिदिएको छ । आजको समयमा प्रेमको अर्थ आकर्षण । आजको समयमा सेक्सको अर्थ शारीरिक भोक मेटाउने मेलो । आजको समयमा कमिटमेन्टको अर्थ केवल एक भ्रम वा मुर्खता ।
प्रेमको अर्थ र महत्व अहिले खिइदै गएको छ । विगतमा प्रेमले आस अर्थ र महत्व राख्थ्यो । प्रेमलाई पवित्र अर्थमा बुझिन्थ्यो । जोसँग प्रेम गरिन्छ, उसैसँग विवाह गर्ने, शारीरिक सुखभोग गर्ने सोंच हुन्थ्यो । विवाहलाई जीवनभरको सम्बन्ध मानिन्थ्यो । सम्बन्धमा पनि मर्यादा र अनुशासन थियो ।
त्यही कारण त विवाहमा एक किसिमको कमटिमेन्ट अर्थात प्रतिवद्धता गराइन्थ्यो, दुलहा र दुलहीलाई । जीवनभर एकसाथ रहने, दुःख सुख बाढ्ने, दाम्पत्य जीवनको मूल्य बुझ्ने, श्रीमान्(श्रीमतीको मर्यादा र जिम्मेवारी पालना गर्ने इत्यादि ।
दाम्पत्य जीवन के हो रु कसरी दम्पतीले एउटा सुन्दर परिवारको रचना गर्नसक्छ रु दाम्पत्य सुखका स्रोत के हुन् रु अहिलेका दम्पतीले यसतर्फ खास ख्याल गरेको पाइदैन । किनभने उनीहरु क्षणिक र देखावटी खुसीमा बढी रमाउन थाले । उनीहरुलाई दाम्पत्य सम्बन्ध केवल सामाजिक बन्धन मात्र हो भन्ने लाग्यो ।
अहिले श्रीमान र श्रीमतीको प्रेममा सोशल मिडिया पनि भाँजो हाल्न आइपुगेको छ । त्यस्तै काम, करियरको चक्करमा पनि उनीहरुले आपसी सम्बन्ध गुमाउँदैछन् । दम्पतीको सयनकक्षा चिसिदैछ । उनीहरुको मनमा प्रेम होइन प्रतिशोधको भावना पलाउन थालेको छ । किनभने श्रीमान्/ श्रीमतीले आफ्नो दाम्पत्य महत्व र मूल्यलाई बुझेनन् । उनीहरुले पारिवारिक जिम्मेवारी र मर्यादालाई बुझेनन् ।
-विगतमा दम्पतीले एकअर्काको खुसीका खातिर आफुलाई समर्पित गर्थे । उनीहरु आफ्नो स्वार्थ भन्दा पार्टनरको खुसीलाई प्राथमिकतामा राख्थे । अहिले भने आफुलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने प्रवृत्ति छ । केवल आफ्नो खुसीको लागि पार्टनरलाई बाध्य बनाउने प्रवृत्ति छ ।
-अहिले दम्पतीबीच भरोसाको सम्बन्ध छैन । उनीहरु एकअर्काप्रति शसंकित छन् । एउटाको मोवाइल, एउटाको इमेल अर्कोले प्रयोग गर्न सक्दैनन् ।
-अहिलेका दम्पतीबीच गोपनियताको नाममा अविश्वासको खाडल बढेको छ । उनीहरु मन र तन साटासाट गर्न राजी हुन्छन्, तर सोशल मिडयाको पासवर्ड साट्न तयार हुँदैनन् ।
-अहिले दम्पतीबीचको शारीरिक सम्बन्ध केवल एकअर्काको मन राख्ने मेलो मात्र भएको छ । उनीहरु वाहिरी सम्बन्धमा बढी रमाउन थालेका छन् ।